Nhoroondo yekambani - Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co, Ltd.
Zviratidzo uye Kushanya Kwevatengi
iHT6 Yakazara-modular Patient Monitor
iHT8 Yakazara-modular Patient Monitor
iHT9 Yakazara-modular Patient Monitor
H5 Inokosha Zviratidzo Patient Monitor
Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co, Ltd.iyo yepamusoro-tech bhizinesi rakabatanidzwa neese akasiyana evarwere monitors 'R&D, kugadzirwa, kutengesa uye mushure-kutengesa sevhisi.
Iyo dzimbahwe inowanikwa muShenzhen China, iyo silicon mupata weChina yepamusoro-tech yekurapa zviridzwa. Kune anopfuura makumi maviri emahofisi ebazi uye mushure mekutengesa mahofisi emahofisi munyika. Isu tinopa & kutumira zvigadzirwa kune anopfuura makumi mapfumbamwe nyika & matunhu kutenderera pasirese. Vanenge zviuru gumi zvekurapa vanoshandisa zvigadzirwa zveHwatime zuva rega rega.
Ndichiri kuona mhando yechigadzirwa, Hwatime Medical inotarisira kushandira pamwe nevamwe vedu pahwaro hwekubatsirana pamwe nekugadzira ramangwana rakajeka nemitengo yakanaka uye nemasevhisi ari nani.
Nyanzvi R & D Simba
Hwatime Medical ine nyanzvi uye mushe-ruzivo R & D timu ine hunyanzvi. Tichaunza hunyanzvi hwepasirese hwepasi rese uye nekupa vatengi mashandiro akanaka uye akanyanya mamonitor.
Yakaomarara Chigadzirwa Hunhu Kuongorora Maitiro
Kune anopfuura makumi maviri emahofisi ebazi uye mushure mekutengesa mahofisi emahofisi mumaguta makuru uye epakati nepakati pasirese, iyo inoisa hwaro hwakasimba hwekusimudzira kwemusika uye mushure mekutengesa sevhisi yezvinhu zveHwatime.
Yakasimba Chishandiso Kugadzira Kugona
Nehunyanzvi hwekudzora mhando, isu tinopa vatengi nezvigadzirwa zvine mashandiro akanaka, kugadzikana kwepamusoro, kugadzikana kwenguva refu uye nemhando yepamusoro.
OEM & ODM inogamuchirwa
Zvigadzirwa zvakagadziriswa uye logo zviripo. Tinokugamuchirai kugovana pfungwa dzenyu nesu uye ngatishandei pamwechete kuti zvigadzirwa zviwedzere kugadzira.
Garandi & Spare Zvikamu
Vhura: 8:00 AM - Kuvhara: 19:00 PM
Kero: F7, Nharaunda A, Baofu Jewellry Industry Park, No. 33, Bulan Rd., Longgang District, Shenzhen, Guangdong, PRC
Runhare: 0755-3667 8888
Charm Itsva China Intelligen ...
Hwatime Medical Akapinda 2019 2019 Istanbu ...
Hwatime Medical Akapinda 2019 Middle ...
Siya Meseji Ku Dzidza Zvakawanda Nezve Iyo Kambani Uye Chigadzirwa Midziyo